| ဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို - တစ်ခုခု Hide APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » personalization Apps ကပ » ဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို - တစ်ခုခု Hide
ဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို APK ကို - တစ်ခုခု Hide
★အဆိုပါ အလွယ်ကူဆုံး နှင့် အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော tool ကိုပုန်းအောင်း! ★✔နယူးအင်္ဂါရပ်: desktop ကို browser ကိုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့မမြင်ရတဲ့ဓာတ်ပုံများ browse ဖို့တစ်ခုမှာကလစ်!
သင့်ရဲ့ပြခန်းထံမှဓာတ်ပုံများ, ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို Hide ။ လွယ်ကူ, လွယ်ကူရှင်းလင်း နှင့် အခမဲ့!
ဒါဟာသင်သည်အဘယ်အရာကိုမြင်သည်နှင့်သင့် privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီသူကိုထိန်းချုပ်ပေးသည်။ "တစ်ခုခု Hide" နှင့်အတူ,
•သင့်အများပြည်သူပြခန်းသင်၏မိတ်ဆွေများ, မိသားစုနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှမရရှိနိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။ နှင့်သင့်ဝှက်ထားသောရုပ်ပုံများကိုကိုယ်အဘို့သာရရှိနိုင်ပါသည်။
•သင်, အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဆဲလ်ကိုအခြားသူများမှဖုန်းနှင့်သင့် privacy အကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမပူပန်ကျော်ပင်လက်သင့်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများမျှဝေနိုင်ပါသည်။
✔ လက်ဗွေ, ပုံစံ or PIN ကိုသော့ခတ်! သင်အကြိုက်ဆုံးကိုရွေးပါ။
✔ တိုက်ရိုက်ဖိုင်များကိုဖုံးကွယ် အားဖြင့်တတိယပါတီ applications များအနေဖြင့် "Share"။ ဥပမာပြခန်း, Browser ကို!
အတွက်ဖုန်းရဲ့မမြင်ရတဲ့ဓာတ်ပုံများ browse မှ✔တစ်ခုမှာကလစ် ဒက်စ်တော့ဘရောက်ဇာ.
✔ Backup ကိုဝှက်ထားသောဖိုင်များ Google က drive ကို.
✔ဓါတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, Google+ ဓာတ်ပုံများ ... ရှိသူများဖိုင်များကိုအားလုံးထောက်ခံကြပါတယ်။
✔ အဆင့်မြင့်ပုံရိပ်ကြည့်ရှုသူ အသေးစိတျ၏ pixel အဆင့်ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
✔ GIF ကို ထောက်ခံသည်။
✔တင့်တယ် themes များ.
✔ အတု mode ကို သင့်ရဲ့ privacy ကိုမမျှော်လင့်ဘဲစစ်ဆေးမှုများအဘို့အကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
✔လွယ်ကူရန် ဝေစု အခြားသူများအားသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံ / ဗီဒီယို။
✔ တက်မပြပါဘူး in မကြာသေးမီကအသုံးပြုခဲ့ apps များစာရင်းဖြစ်သည်။
✔ပို features တွေလာမယ့်နေကြသည်။
1 Step: သင် privacy ကိုထားလိုသည့်ဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုရွေးချယ်ပါ, သူတို့ဖုံးကွယ်။
2 Step: သင်၏ဝှက်ထားသောဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုဝင်ရောက်ဖို့ပုံစံသော့ခတ်အသုံးပြုခြင်း။
3 Step: restore မှဝှက်ထားသောဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုရွေးချယ်ပါ။
ပြဿနာရှိပါသလား? မကောင်းတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်မထွက်ခွာမီပထမဦးဆုံး coliferlab@gmail.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ငါတို့ကဲ့သို့မကြာမီကျနော်တို့လုပ်နိုင်သကဲ့သို့သင်တို့အဘို့အပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။ အကြံပြုချက်? ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပစ်သတ်ပေးပါ။ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးများကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဗားရှင်းအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ developer များ said:
"ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါသည်စျေးကွက်အပေါ်ပုဂ္ဂလိကပြခန်း app ကိုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါတော်တော်များများသူတွေကိုကြိုးစားနေပြီးနောက်စိတ်ပျက်တယ် - သူတို့က Non-ဟိုလို style အမျိုးမျိုး, နှေးနှေးနှင့်လည်းရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦး, သန့်ရှင်းလွယ်ကူရှင်းလင်းခြင်းနှင့်အလှအပတစျခု - ဒါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားဖြင့်ဒီတစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သင်က❤သုံးပြီးကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ "
စကားဝှက်နဲ့ပြဿနာ? အောက်ကအကူအညီနဲ့ Check:
Read / ပြင်ပ storaga ရေးရန် - မီဒီယာဖိုင်ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ရေးပါ။
လက်ဗွေရာကိုသုံးပါ - သင့်ရဲ့ app ကိုသော့ဖွင့်ဖို့လက်ဗွေရာကိုသုံးပါစနှေငျ့။
Access ကိုအင်တာနက် - backup လုပ်ထားသို့မဟုတ် Google drive ကိုမှမီဒီယာဖိုင် restore ။
Access ကိုကြမ်းတည်နေရာ - Google ရဲ့ AdMob ကိုကြော်ငြာနေဖြင့်လိုအပ်သည်။
- တစ်ဦးကို browser အတွက်, ယခု HD ကို SMTH ရန်သင့်အားတတ်နိုင်သမျှ "ဝေစု" ပုံရိပ်တွေကသူတို့ကိုဖျောက်ရန်။ အဘယ်သူမျှမ download, နောက်ထပ်ခြေလှမ်းလိုအပ်ပါတယ်။
- algorithm ကို sorting နောက်ဆုံးရေးသားချိန်ဖိုင်ကို။
ဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို - တစ်ခုခု Hide
5.32 ကို MB